दिल्लीले नखेलाएको भन्दै मजाक उडाउने फ्यानमाथि खनिए सन्दिप, दिए सोच बदल्ने नसियत |
२०७७, ३ कार्तिक सोमबार १८:३१ October 19, 2020 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल)मा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली क्यापिटल्सले उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी नै राखेको छ । लिगमा ९ खेल खेलिसक्दा दिल्लीले ७ जित सहित शिर्ष स्थान कब्जा गरेको छ । तर दिल्ली ९ खेल खेलिसक्दा पनि अहिलेसम्म नेपाली स्टार स्पिनर सन्दिप लामिछानेले भने एउटा पनि खेल खेल्न पाएका छन् ।
सन्दीप यस पटक ११ भित्र नपर्नुको कारण हो, टीममा स्पिनर धेरै हुनु। सन्दीपले पहिलो सिजनबाटै दायाँ हाते लेग स्पिनर अमित मिश्रासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको थियो। दोस्रो सिजन मिश्रासँगै वायाँ हाते अर्थोडक्स अक्सर पटेल थपिए। दिल्लीमा जारी सिजन अर्का अनुभवी दायाँ हाते अफ स्पिनर रविचन्द्र अश्विन पनि थपिएका छन्।
आश्विन र पटेल आवश्यकता परे ब्याटिङबाट पनि टीमलाई योगदान गर्न सक्छन्। जुन क्षमता तुलनात्मक रूपमा सन्दीपमा कम छ। त्यसकारण पनि सन्दीपलाई टीममा स्थान बनाउन कठिन परेको छ। हुन त औलामा चोट लागेका कारण मिश्राले आईपीएलको बाँकी सिजनबाट आउट भैसकेका छन् । यसका बावजुद सन्दीपले आश्विन र पटेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्नेछ।
२०१८ मा सन्दीप न्यूनतम २० लाख भारुमा दिल्लीसँग आबद्ध भएका थिए । पहिलो सिजनको अन्तिम तीन खेलमा सन्दीपले मौका पाए । उनले पहिलो सिजनमा पाँच विकेट लिए । गत वर्षको संस्करणसमेत उनले सुरुवातीमै स्थान बनाए । त्योवेला उनले ६ खेलमा आठ विकेट लिए । सन्दीपको प्रदर्शन उतारचढाव हुँदा थप खेलमा भाग लिन पाएनन् । योपटक भने सन्दीपले नौ खेल सकिँदासम्म दिल्लीबाट बलिङ गर्न मौका पाएका छैनन् ।
उता सामाजिक सञ्जालमा भने दिल्लीले सन्दिप एउटा पनि खेलमा नखेलाएको भन्दै ट्रोल भैरहेको छ । उनलाई पानी बोक्न मात्र दिल्लीले २० लाख भारुा किनेको भन्दै सन्दिपको मजाक उडाउने काम भैरहेको छ । यसबिच आफुलाई ट्रोल बनाउनेलाई सन्दिपले जवाफ फर्काएका छन् । ट्विटरमा सन्दिपको ट्रोल गर्दै लेखेका छन् ” हामी र तमि मा खासै फरक देखिन दर्शक दुइटै फरक यत्ती हो तमि दुबै म बहराइ” जसको जवाफमा सन्दिपले भनेका छन् ” फरक छ हजुर फरक छ! फरक नभए, तपाईं यहाँ बसेर हेर्नुहुनुहुँथ्यो र म त्यहाँ बसेर! सोच बदलौ “।